Accueil > Gazetin'ny nosy > Ihosy : Miady an-trano ny mpomba an-dRajoelina
Ihosy : Miady an-trano ny mpomba an-dRajoelina
Faritra maromaro izay no efa nitondranay vaovao teto amin’ity gazety ity ny hadalana ataon’ireo mpomba an’ingahy Andry Nirina Rajoelina any amin’ny faritra manerana ny nosy. Raha ny zavamisy hatramin’izao dia ady an-trano no mitranga amin’ireo mpomba ny filoham-pirenena ity. Tena mampalahelo ny zavatra mitranga satria izy ireo dia niseho ho mpanohana mahafatram-po nefa dia izao lasa ady saritaka izao ny misy ankehitriny. Misy mihitsy aza no milaza fa hivadika hanohatra avy hatrany raha vao tsy hahazo toerana.
Mbola averinay eto hatrany fa ny fiadiana toerana ho governora sy depiote indray izao no tena malaza. Samy miady ny hatolotrin’ingahy Andry Nirina Rajoelina avy izy ireo, na koa hatolotrin’ny antoko Tgv-Mapar. Iadiana izay tsy izy ny hahazo fankatoavana amin’izany ankehitriny ka lasa ady goavana amin’ireo olona sy fikambanana nampandany azy ireo.
Ny avy any Ihosy na ny faritr’Ihorombe indray no nahazoana vaovao amin’izao fotoana izao. Tena ady an-trano tsy misy toa izany no mitranga.
Mizara telo ny mpomba an’ingahy Andry Nirina Rajoelina. Ny iray voalohany dia ny fikambanana IRD( isika rehetra amin’ny distrika miaraka amin’i Andry Rajoelina). Ingahy Barthelemy na i Lemy no mitarika azy ity. Manohana an’i Naipatreka minisitr’i Hery Rajaonarimampianina teo aloha ity ranamana ity. Misy fikambanana maromaro izy ireo no mivondrona ao anatin’izany ka isan’izany ny Lafatra sy ny TGV.
Ny iray faharoa dia ny fikambanana najoron’ingahy Ralava izay depiote teo aloha ary mpanohana an’ingahy Hery Rajaonarimampianina izay tsy izy nefa dia nivadika palitao vetivety teo ka lasa niseho ho mpakasitraka an’i Rajoelina izao indray. Voatazona amin’ny raharaha katsaka tao amin’ny Tozzi Green ny fiara kamiao an’ity depiote ity amin’izao fotoana izao ka mbola voageja ao amin’ny polisy ao Ihosy.
Ny iray fahatelo dia ny TMH (Tanora miandrandra ny hoavy) izay misy an’i Ranary Tsiatorofahita. Nanohana an’i Andry Rajoelina koa ity fikambanana ity ary nanome fiarakodia nampiasany tamin’ny propagandy iny. Depiote teo aloha ary efa lehiben’ny faritra koa.
Samy milaza ho kandidàn’i Rajoelina sy ny Mapar avokoa izy telo ireo ka raikitra ny ady ao Ihosy ao amin-tsika miteny izao.
Nanao fety hoan’ny vahoakan’Ihosy ho fampiarahabana noho ny fandresen’ingahy Andry Rajoelina filoham-pirenena ingahy Barthelemy “IRD” ny sabotsy faha 9 febroary 2019 teo. Avy hatrany dia mba namory olona koa ny depiote Ralava omaly alahady faha 10 febroary 2019 ho sehatr’izany, ka nankalaza izany koa. Tena mahamenatra ny raharaha nefa moa dia izay no zava-misy any Ihosy amin’izao fotoana izao. Mbola tsy fantatra koa ny hataon’ingahy Ranary Tsiatorofahita.
Ny tena olana lehibe nefa dia ny ataon’ireo SN (sekretera nasionaly) sy ireo Coordo(mpandrindra) ao amin’ny antoko Mapar sy TGV any amin’ny faritra sy distrika ity satria dia lasa mampiady ny momba an’i Rajoelina indray no ataon’izy ireo. Tena tsy mahavaha olana mihitsy amin’ny antoko izy ireo.
Izy ireo no miseho azy ho solontenan’ i Andry Rajoelina any amin’ny faritra iadidiany any. Tsy fantatra intsony na mbola misy ny rafitra politika ao amin’ity antoko ity raha toa ka mandinika ny zavamisy ankehitriny ny mpanaraka ny vaovao politika amin’izao fotoana izao. Toa samy miseho ho sefo sy “patron” avokoa izay omena andraikitra ao amin’ny antoko. Hita sy tsapa amin’izao fotoana izao fa tsy misy ny fandrindrana ao amin’ny antoko Mapar sy TGV fa samy miseho ho be loha avokoa ireo nomena andraikitra.
Raha izao no mitohy dia ho potika ity antoko mpanohana an’i Andry Rajoelina ity. Ho diso fanantenana noho ny ataon’ireo olona mpomba fitondrana ireo ,ny vahoaka. Heverina fa misy manao tetika hanapotehina an’i Rajoelina izao tranga izao. Aza hadino fa maro miandry kendritohana ny mpanohitra ankehitriny ka tokony hitandrina ny mpomba ny fanjakana.